आमाछोराको अ’नैतिक स’म्बन्धबाट आमा गर्भवती भएपछि… – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/आमाछोराको अ’नैतिक स’म्बन्धबाट आमा गर्भवती भएपछि…
आमाको कोख र काखको तुलना स्वर्गसँग तुलना गरिन्छ । तर पिता केवल एक मार्गदर्शकका रुपमा चिनिन्छन् । आमाको चर्चा पूर्वीय सभ्यतासँग जोडिएका बेद, पुराण र धर्मग्रन्थमा अनेकौँ पटक गरीएको पाइन्छ ।
आमाले अनेक कष्ट व्यहोर्दै नौ महीना गर्भमा राखेर शिशुलाई अन्न, जल र श्वाससँगै ममता, स्नेह र संस्कारले सिंचन गर्छिन्; कठोर प्रसव पीडा झेलेर सन्तानलाई पृथ्वीमा पदार्पण गराउँछिन्; आफूले नखाई–नखाई सन्तानको भोको पेट भर्छिन्; आफ्नो ज्या नको पर्वाह नगरी सन्तानको जीवन रक्षा गर्छिन्; र मानव संसारको जीवनचक्र चलाउँछिन्।
यही कारण आमालाई जगत जननी भनिन्छ। मानव जातिका लागि धर्तीले जति बोझ् थामेकी हुन्छिन्, सन्तान र परिवारका लागि आमाले त्यतिकै कष्ट उठाउँछिन् भन्ने मान्यता छ।
नेपाली आमाका अनेक रूप छन्। २५–२५ सन्तान जन्माउनेदेखि छोराछोरीसहित देह त्या’ग गर्ने र छोरालाई मृ‘त्युद’ण्ड’बाट जोगाउन आकाश–पाताल एक पार्ने आमाहरू यहाँ छन्।
लमजुंगको सुन्दरबजार ४ दुरा डाँडा घ’टयो एउटा क’हाली लाग्दो घ’ट ना । २० वर्षीय छोरा सागर भुजेल र ३५ वर्षीय आमा धनमाया भुजेल बीचको अ’नैतिक स’म्बन्धका कारण धनमायाको ज्या ‘न ग ‘एको छ । आमा भन्ने शब्द आफैमा पवित्र शब्द हो । आमा चाहे आफ्नै होस् या सानीआमा ठूलीआमा जे होस् आमा त आमा नै हो । तर लमजुंगको सुन्दर बजार ४ मा आमा छोराबीच अ’नैतिक स’म्बन्ध भएपछि आमा ग’र्भवती भईछन् ।
आमा गर्भवती भएको कुरा छोराले थाहा पाएपछि आफ्नो इज्जत जान्छ भन्ने डरले छोराले आ’मालाई घरमै मा’रेका छन् । आमालाई मा’र्नमा उनलाई उनका भन्जाले सहयोग गरेका छन् ।
आमालाई घरको कोठा भित्र नै मा’रेर ल’तार्दै घर नजिकै रहेको गो’बर ग्याँसको खा’ल्डोमा पु’रेको कुरा बाहीरिएपछि घ’टनाको बारेमा सबै कुरा बाहीरिएको हो । यो विषयमा गाउँलेहरुले पनि आमा छो’राको स’म्बन्धको बारेमा मुख खोलेका छन् ।
रुकुम घटनाले देश नै रोईरहँदा..शिशिर भण्डारी लाखौं सहयोग बोकेर कहाँ पुगे ? (भिडियो हेर्नुस)
साम्राज्ञीले भुवन पछि युटुवरलाई दिईन् क’डा जवाफ न्युजको हे’डलाईन पढ्न ला’ज लाग्छ ? (हेर्नुस् भिडियो)